Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ubax dhigay meeshii lagu dilay Sir David Ammess | Dayniile.com
Home Warkii Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ubax dhigay meeshii lagu dilay Sir David Ammess
Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ubax dhigay meeshii lagu dilay Sir David Ammess
Ra’iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson iyo hogaamiyayaal kale ayaa waxa ay xirmooyin ubax ah dhigeen hoolka Kaniisaddii lagu dilay xildhibaan David Ammess, oo ka tirsanaa xisbiga Conservative-ka, kaas oo Jimcihii toori nafta loogaga jaray.
Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee mucaaradka ah, Keir Starmer, iyo Xoghayaha arrimaha gudaha Priti Patel ayaa sidoo kale tacsidooda ku gudbiyay goobta uu dilka ka dhacay ee bariga London.
25 jir laga shakisan yahay oo loo malaynayo inuu Soomaaliya ka soo jeedo ayaa xabsiga loo taxaabay.
Booliska UK ayaa fal argagixiso ah ku tilmaamay dilka loo geystay Sir David Amess kaas oo dhowr jeer lagu dhuftay toorrida xilli uu Jimcadii ku sugnaa deegaanka Leigh-on-Sea oo ka tirsan gobolka Essex, oo ah halka laga soo doortay.
Previous articleKumannaan dibadbaxayaal ah oo hor tuban madaxtooyada Suudaan
Next articleWasaaradda caafimaadka Puntland oo Garowe ka bilawday tallalka dabeysha
Sanatooradii ugu danbeeyey ee Soomaliland oo maanta la dooranaayo
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ka dhacdo doorashada Shan kursi oo ka harsan kuraasta Aqalka Sare ku leeyihiin gobolada Waqooyi ee Somaliland...
Muxuu yahay gaariga dahabka ah ee muranka ka dhaliyay Holland?
OIC countries promise fund to end Afghanistan’s ‘unrest’
Ciidamada Puntalnd iyo PSF oo furay wadooyinka qaar ee lagu dagaalamay...
Al-Shabaab Oo Weerar Ku Qaaday Xero Ay Ku Sugnaayeen Ciidamo Ka...
Koonfur Afrika: Maxaa ka jira in moos cudur wata oo Soomaaliya...